Covid: ‘Imhandu yapinda mumba’ | Kwayedza
Covid: ‘Imhandu yapinda mumba’
22 Dec, 2020 - 10:12	 2020-12-22T11:09:16+00:00 2020-12-22T10:06:46+00:00 0 Views
Cde Shain Chakanyuka
SANGANO rinomirira vanamujibha nanachimbwido reZimbabwe Liberation War Collaborators Association (ZILIWACO) rinoti apo nyika iri kupemberera zuva rekubatana, reUnity Day, zvakakosha kuti veruzhinji vabatane zvakare mukurwisa chirwere cheCovid-19 sezvo chakangofanana nemhandu inenge yapinda mumba kana munyika.
Zuva iri rakavepo zvichitevera kubatana kwakaita bato reZanu nerePF Zapu mugore ra1987.
Munyori mukuru weZILIWACO, Cde Shain Chakanyuka, vanoti kana vanhu vakabatana uye kutevedzera matanho akatarwa ekumisa kupararira kweCovid-19, zvinova nyore kukunda chirwere ichi.
“Isu sesangano reZILIWACO, tinofadzwa zvikuru nekubatana kwakaita mapato maviri aya zvikaunza budiriro munyika yose uye izvozvi tinoona zvibereko zvekubatana uku. Tine zvakawanda zvemabasa ebudiriro zvatiri kuita kuburikidza nekubatana uku,” vanodaro Cde Chakanyuka.
Vanokurudzira veruzhinji kuita chirwirangwe panyaya yekupedza chirwere cheCovid-19 icho chavanoti chakafanana nemhandu yapinda munyika.
“Pachivanhu tinoti imbwa mbiri hadzitorerwe nyama, nekudaro apo tiri kuparidza kubatana kwedu kwakaunza runyararo nezvibereko zvatinoona nhasi, ikurudziro yedu zvakare kuti tirambe takabatana muhondo yekurwisana nechirwere ichi, hazvidi kuti tivarairwe paCovid-19,” vanodaro Cde Chakanyuka.
Vanoenderera mberi vachiti, “Ngatitevedzei zvose zvinodiwa kurwisa Covid-19 sekupfeka mamasiki, kusanganisirawo nepazororo reKirisimasi uye tisvike muGoredzva tiriko tose pasina anorwara.”